Khamiis (Af Ingiriis : thoub, thawb; Af carabi: ثوب) waa maro dheer oo laga tolo cudbi taasi oo xidhaan raga, gaar ahaan Dunida Islaamka iyo wadano badan oo Carabta ah. Khamiisku waa mid dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay. Khamiisku wuxuu ka mid yahay dharka ragga inkastoo dumarka laftoodu xidhaan mararka qaar. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.
Last edited on 14 Sebteembar 2017, at 15:52